သွားကိုက်ခြင်းနဲ့သွားပိုးပေါက်အတွက်ဆေးစွမ်းတစ်လက်မာလကာရွက်… – Trend.com.mm
သွားကိုက်ခြင်းနဲ့သွားပိုးပေါက်အတွက်ဆေးစွမ်းတစ်လက်မာလကာရွက်…
Posted on March 2, 2019 March 1, 2019 by Shun Lei Phyo
သိပ်ကိုခံရခက်တဲ့သွားရောဂါ တွေကို အညွှန့်တုံး စေဖို့ အတွက်ဆေး စွမ်းကောင်းတစ်လက် ရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးကြပြီလား? သိပ်ကို ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့နာကျင်မှုကြီးကို ဘယ်လိုဖြေ ဖျောက်ကြမလဲဆိုတာ သိချင်ကြမှာပါ။ ဆေးခန်းသွားကုသပြီးဆေးသုံးစွဲတာဟာလည်းနည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုပင်မဲ့ တစ်ခါတစ်လေ ဘေးက နေတစ်ခြားသက်သာမဲ့သဘာဝကုထုံး လေး တွေပါ Try ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အ ပျောက်မမြန်လေဘူးလား? ဒီလိုညွှန်းနေရတဲ့နည်းလမ်း လေးက တော့ ….
မာလာကာရွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မာလာကာရွက်ခပ်ရင့်ရင့် လေးကိုခူးပါ။ ရင့်ရင့် လေးဆိုပိုကောင်းပါတယ်နော်။ ပြီးရင် ရေဖွား ဖွားပါ အောင်စင် အောင်ဆေးပါ။ ပြီးတာနဲ့ ရေ နွေးအိုးထဲကို ထည့်ပြုတ်ပေးပါ။ ရလာတဲ့ အဖန်ရေကို ခွက်သန့်သန့် လေးနဲ့ ခပ်ထားပြီး ပလုတ်ကျင်း ရေ အ နေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆားထည့်လည်းရသလို ဆားမပါလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ပလုတ်ကျင်းရေ လေးကို တစ်နေ့ကို သုံးကြိမ် လောက် ကျင်းကျင်းပေးပါ။
ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ သွားကိုက်ခြင်းကိုသက်သာစေသလို သွားကိုက်ဝေဒနာမရှိတဲ့သူ ဆိုရင်တောင် သွားပိုးပေါက် တွေသွားချေး တွေကို ထိရောက်စွာကုသ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့သွားဝေဒနာကို ကုသနိုင်ပါစေ…
သိပျကိုခံရခကျတဲ့သှားရောဂါ တှေကို အညှနျ့တုံး စဖေို့ အတှကျဆေး စှမျးကောငျးတဈလကျ ရှိတယျဆိုတာသိပွီးကွပွီလား? သိပျကို ကွောကျစရာ ကောငျးတဲ့နာကငျြမှုကွီးကို ဘယျလိုဖွေ ဖြောကျကွမလဲဆိုတာ သိခငျြကွမှာပါ။ ဆေးခနျးသှားကုသပွီးဆေးသုံးစှဲတာဟာလညျးနညျးလမျးကောငျးတဈခုပငျမဲ့ တဈခါတဈလေ ဘေးက နတေဈခွားသကျသာမဲ့သဘာဝကုထုံး လေး တှပေါ Try ကွညျ့မယျဆိုရငျ ပိုပွီး အ ပြောကျမမွနျလဘေူးလား? ဒီလိုညှနျးနရေတဲ့နညျးလမျး လေးက တော့ ….
မာလာကာရှကျပဲဖွဈပါတယျ။ မာလာကာရှကျခပျရငျ့ရငျ့ လေးကိုခူးပါ။ ရငျ့ရငျ့ လေးဆိုပိုကောငျးပါတယျနျော။ ပွီးရငျ ရဖှေား ဖှားပါ အောငျစငျ အောငျဆေးပါ။ ပွီးတာနဲ့ ရေ နှေးအိုးထဲကို ထညျ့ပွုတျပေးပါ။ ရလာတဲ့ အဖနျရကေို ခှကျသနျ့သနျ့ လေးနဲ့ ခပျထားပွီး ပလုတျကငျြး ရေ အ နနေဲ့အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဆားထညျ့လညျးရသလို ဆားမပါလညျး အဆငျပွပေါတယျ။ ပလုတျကငျြးရေ လေးကို တဈနကေို့ သုံးကွိမျ လောကျ ကငျြးကငျြးပေးပါ။
ဒီနညျးလမျးလေးဟာ သှားကိုကျခွငျးကိုသကျသာစသေလို သှားကိုကျဝဒေနာမရှိတဲ့သူ ဆိုရငျတောငျ သှားပိုးပေါကျ တှေသှားခြေး တှေကို ထိရောကျစှာကုသ ပေးနိုငျပါတယျ။
ဒီနညျးလမျးလေးနဲ့သှားဝဒေနာကို ကုသနိုငျပါစေ…
လူတစ်ယောက်အ ပေါ်စိတ်ကွက်သွားချိန်မှာ အလုပ်သင့်ဆုံးအပြုမူ…